Embedded OpenType (EOT) fonts Issue — MYSTERY ZILLION
Embedded OpenType (EOT) fonts Issue
September 2008 edited November 2008 in Other
ကျွန်တော် ခု ပြသနာ တခုတက်နေလို့ သိတဲသူရှိရင် ပြောကြပါ။ ကျွန်တော်ပြသနာက ဒီလိုပါ။ ခုကျွန်တော် Web Site တခုလုပ်နေတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် site သုံးတဲ့ Font က ZawGyi ပါ။ ပြသနာက Zawgyi font မရှိတဲ့စက်ဆိုရင် ???????? တွေပဲ ပေါ်နေတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Browsing လုပ်တဲ့ စက် ရဲ့ Font ကို depend လုပ်နေတယ်လို ပြောရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်အလိုဖြစ်နေ တဲ့ Feature ကို မကြိုက်ဘူး။ User က Font ကို Install လုပ်လို့ရ ပေမယ့် ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက Browse လုပ်တဲ့ PC မှာ ZawGyi မရှိလည်း အစဉ်ပြေစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်တော့ EOTဆို တာသိလာတယ်။ သူတို့ Instruction အတိုင်း လုပ်တော့ ZAWGYIO0.eot file ကိုရတယ်။ ရတော့ ကျွန်တော် FTP ထဲမှာလည်း ထည့်ပြီးပြီ။ CSS ကနေလည်း သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း ရေးပြီးပြီ။
ဒါပေမယ့် Site မှာ effect မဖြစ်ဘူး။ ZawGyi Font မရှိရင် ???????? တွေပေါ်နေတုန်းပဲဗျာ။ လုပ်ဖူးတဲ့ သူရှိရင် ပြောပေးပါအုံး။
အင်တာနက်ပေါ်တင်ထားတာ မှတ်လား။ ညွန်းထားတဲ့ url ကြီးက တစ်လွဲဖြစ်နေတယ်လေဗျာ... အင်တာနက်ပေါ်တင်ထားတယ်ဆိုရင် upload တင်ထားတဲ့ လင့်ကို သေချာ ပြန်ညွန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-"http:// ..... ..... ../ZawgyiO0.eot) စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီးတော့ eot လုပ်တာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်တုန်းက ဆိုက်ရေးခိုင်းတုန်းမှာ ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကိုပဲ အဲဒီ eot က အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ- www.123.com အတွက်ပဲ လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် www.123.com ကိုပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 123.com လို ခေါ်တဲ့ သူတွေမှာ အဲဒီ eot ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ကျွန်တော် URL ကို လည်း ထည့် ပြီ လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။
EOT လုပ်တုံးကလည်း ကျွန်တော် Site အတွက် ပဲလုပ် ခဲ့ တာပါ။ yeman ပြောသလို ကျွန်တော်ရဲ့ domain name ကိုပဲ လုပ်ထားတာပြီ။ EOT ရလာတော့ FTP ထဲ မှာ သွားထားပြီ CSS ကနေ ပြန် ခေါ်တာ။ yeman မှာ Zawgyi EOT လုပ်ပြီး သား Sample Site ရှိရင် link လေးပေးပါလား။ Zawgyi မရှိတဲ့ စက်ကနေ Browse လုပ်ကြည့်ချင်လို့
ဖွန့် ကို ဖျက်ပြီး ကိုမောင်လှတို့ ကိုညီလင်းဆက် တို့ဘလော့တွေကို Internet Explorer နဲ့ သွားကြည့်ကြည့်ပါလား။ သူတို့ အရင်တုန်းကတော့ EOT ထည့်ထားတယ်။ ရှိဦးမလားမသိဘူး။
ကျွန်တော် ကိုမောင်လှတို့ ကိုညီလင်းဆက် တို့ဘလော့တွေကို IE6 and FF browser တွေနဲ့ ကြည့်ပြီးပြီ
IE7 နဲ့ တော့ မကြည့်ရသေးဘူး။ အကို
zawgyi font တွေမမြင်ရဘူး။
Firefox မှာ လုံးဝမရဘူး ဗျ။ အဲဒါ IE ရဲ့ Feature.
IE6 မှာ ထပ် ကြည့်ချင်ရင် ဟော့ဒီ ဟာ ထပ်ကြည့်ကြည့်
မရရင်တော့ တစ်ခုခုလွဲနေတာဖြစ်မယ်။ ကျနော်လဲသိတော့ဘူး။
ကျွန်တော် တစ်ခုပြောဖို့မေ့သွားလို့...။ ကိုaTxIvG4001 ပြောသလိုပေါ့။ Firefox မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ IE နဲ့မှ လုပ်တာပါ။
ဒီဆိုက်မှာ တင်ထားတာ လေ့လာကြည့်ပါဦး။ eot ကို....
မှာပါ။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဘလော့ဂါက စာအရေးအသားကောင်းတယ်။ ရေးနိုင်တယ်။
ဒါသူရဲ့ eot code ပါ။
ဒီဆိုက်မှာ တင်ထားတာ လေ့လာကြည့်ပါဦး။ eot ကို.... မှာပါ။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဘလော့ဂါက စာအရေးအသားကောင်းတယ်။ ရေးနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာတွေ ပြောပေးတဲ့ ကိုaTxIvG4001 နဲ့ yeman ကို ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော် ဆက်ပြီး Try ကြည့်ပါမယ်။
ကျွန်တော် မ ninenine ရဲ့ Blog ကို နဂိုထဲကဖက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် EOT ကိုသတိမထားမိဘူး။ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။
ခုတော့ Weekend အပြင် go လိုက် အုံးမယ် အကိုရေ့
ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲဗျာ။ IE7 မှာရော firefox လို လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မာ font ဇော်ဂျီဝမ်းကို ကောင်းကောင်းမြင်ရအောင် လုပ်လို့ရလား။ တစ်ချို့ websites တွေက firefox မှာကောင်းကောင်းမြင်ရပေမယ့် IE7ဆိုရင် အတုံးတွေပေါ်နေတယ်။ အခုကျနော်က IE7သုံးပြီး MZ ကိုဝင်တာ။ အခုဆိုရင်တော့ အားလုံးမြင်ရတယ်။ အတုံးတွေ မပေါ်ဘူး။ ဘာတဲ့ EOT ဆိုတာလုပ်ထားလို့လား ပြောပါဦးနော်။